သူယောင်မယ်သီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » သူယောင်မယ်သီး
Posted by ဂျစ်စူ on Oct 24, 2011 in Aha! Jokes, Satire | 21 comments
သူယောင်မယ်သီး..Nareepool ဆိုပြီးရှာတာ..ရွာမှာမတွေ့ ဝူးဗျာ
မတွေ့တော့ မရှိဝူးမှတ်တယ်..
မရှိတော့ တစ်ချို့မသိဝူးမှတ်တယ်…အဲတော့ ….တင်ဒယ်..ဒါဗျဲ.. 8O
ဆိုဒ်တစ်ခုမှာတွေ့ မိရာက အနော်လဲ တစ်ကယ်လား မှတ်တာပေါ့….
မိန်ခလေးသဏ္ဌာန်နဲ့အံ့သြစရာကောင်းအောင်တူလှပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်အခေါ် Nareepool ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ အနီးက Petchaboon မှာ တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်..။ မြန်မာပြည် ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှာလဲ ရှိကြောင်း သိရပါသေးတယ်။ ဣန္ဒိယ နိုင်ငံ ဟိမ၀န္တာတာင်တန်း ၀န်းကျင်မှာလဲ ပေါက်ရောက်ကြောင်းလဲ ထပ်မံသိရ ပါသေးတယ်။ Naree ဆိုတာ ကတော့ မလေးလို မိန်းကလေးဖြစ်ပြီးတော့ pol ဆိုတာကတော့ သစ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးသစ်ပင်ပေ့ါရှင်.
ကျနော်လဲ အံသြပြီး..ကိုယ့်ကိုယ်ကို တုံးလှချည်ဆိုပြီး ခံပျင်းနေတာ..
သူ့ ပုံတွေ ဆက်ကြည့်တော့..
အပင်မှာ ကောင်မလေး ဖင်ပြောင်လေးတွေနဲ့ …အသီး သီးနေလေရဲ့..
တစ်ချို့ အသီးကျတော့လဲအသက် ၀င်နေသား မပြောတတ်..ရှက်ပြီး အုပ်ထားလေရဲ့
တစ်ချို့ ကြတော့လဲ ရှက်ဘူး..ဗျာ..အုပ်မထားဘူး..အဟိ..
အသီးရဲ့ ဘော်ဒီကြည့်ရတာလဲ မဆိုးလှဘူး….ဆိုဒ်ပျက်…ဂိုက်ပျက်မဟုတ်လေတော့..ကျနော်လဲ
သံသယ စ၀င်လာတာပဲ….တစ်ကယ့်အသီး မဟုတ်ဘူးဆိုတာ..
တော်တော်လက် ကမြင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာ ပဲ..
ဘယ်လိုများ လုပ်ပြီး ရိုက်ထားသလဲ မပြောတတ်ဘူး..ကြံကြံဖန်ဖန်ဗျာ..
လန်းတယ်နော် အဲယောင်လို့ တူတယ်နော်
ဇော်ဂျီတောင် ဖြစ်ချင်လာဘီ ကိုချိုရေ
ရဲဘော် အဲဒါကြီးက အင်ကြီးတဲ့ ဆိုကလားပဲနော်
ရဲဘော် မေ့နေပြီ ထင်ပါရဲ့ 
“…မူးပြီလား….. မေ့ပြီလား…ငါ့ကို ပုလင်းသောက်ခွင့် ပေးပါ ”
တစ်ပင်လုံး ပုတ်ပြတ်ရော ၀ယ်လို့ရလား။
ရွာသားတွေ လည်း ဝေမျှပေးချင်လို့ပါ။ ဟားဟား။
ကိုကိုဖော်….။ ခင်ဗျားကတော့ ရှာရှာဖွေဖွေ တွေ့တတ်ပါပေရဲ့…။ သူယောင်မယ်ဆိုတာ ရှေးဟောင်းဒဏ္ဍာရီ ပုံပြင်ထဲက ယုံတမ်းပုံပြင် ထဲမှာပါတဲ့ အသီး မဟုတ်လား …… ယုံလွယ်တတ်သူတွေ အဟုတ်ထင်မှာပေါ့ဗျာ…… ခင်ဗျားအမြင်လေးပါထည့်ရေးပေးလိုက်တာကောင်းပါတယ်…။ တော်ကြာ ရေသူမရှာသလို သူယောင်မယ်လိုက်ရှာနေကြမှဖြင့်……… ရွာထဲက မောင်ပေတို့ ဂရုစိုက်…။ တော်ကြာသူယောင်သီးလိုက်ရှာနေဦးမယ်…….။
သူယောင်သီး တော့ လိုက်မရှာတော့ဘူး
တပ်ကုန်းဘက် က မွာမွတ်နီ မှန်မှန်မူး ဆိုတာကိုတော့
ဖက်ကြမ်းတစ်လိပ် ထွေးညိုတစ်ခွက်ရယ်နဲ့ 
ဒီက ဖိုဝင်သားကွ.. ဟဲဟဲ..
မှတ်မိတာတော့ ရွှေနီရဲ့ လာအိုနယ်စပ်ကသူယောင်သီး post နဲ့သိပ်မကွာဘူး၊photoshop တွေပါလို့ နားလည်သူတွေပြောတယ်။
ဒါက..ရွှေနီရဲ့ လာအိုခရီးက သူယောင်မယ်..။ http://myanmargazette.net/53431/travel
ဒါက.. သူယောင်သီးက… အာရွှီးဖြစ်ကြောင်းပြောတဲ့.. လင့်ခ်.. http://www.hoax-slayer.com/nareepol-tree.shtml
အစစ်ဖွက်ထားတာများရှိရင် လိုခြင်းပါကြောင်း ..။။
မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိသာပါတယ်.. သဘာဝက သီးတဲ့အသီးဗျာ. Shade တူတယ်ဆိုရင်ထားတော့..
အခုဟာက နှာခေါင်း၊မျက်လုံး ၊ပါးစပ်က ပန်းပုထုထားတာကျနေတာပဲ အတိအကျပေါ်လွင်နေတယ် အဲဒီကတည်းက မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး…
အသီဆိုတာ တစ်လုံးနဲ.တစ်လုံး ဆိုဒ်တူချင်မှတူမှာလေ အခုဟာက သူယောင်မော်ဒယ်သီးတွေချည်းပဲ ဟဟဟဟ
ထင်တော့ထင်သားပဲ အင်မှန်းလို့ … ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အသီးက လူပုံ အဲ့လောက် ချွတ်ဆွတ်တူမှာ မဟုတ်ဘူး … ။
Source လိုက်ရှာတာ 2008 လောက်က ဖြစ်နေတယ်..
အဲတော့…ရွာထဲလဲ ရှိလောက်တယ်ဆိုပြီး လိုက်ရှာတာ မတွေ့ ဘူး
မယ်ရွှေနီရဲ့ပို့ စ်က ပုံနဲ့ တော့ မတူပါဘူး….
အစက ဒီပိုစ်ကို မမန်းတော့ဘူးလို့ပါပဲ.. သိတာလေး ၀င်ဖော လိုက်ပါအုန်းမယ်။
အဲဒီ အသီးပုံတွေက အတုတွေပါ။ ဟိုမှာ ရှိတယ် ဒီမှာ ရှိတယ် ဆိုပြီး ယုံတမ်းကို သက်သေထူထားတာပါ။
သူယောင်သီး အစစ်ကတော့ တကယ်ရှိချင်ရှိပါလိမ့်မယ်။
ပေါက်ဖော် ကသာ မသိရှာတာ လမ်းဘေးမှာ သူယောင်သီးပုံ ဆိုပြီး ပြက္ခဒိန် အရွယ် စာရွက်နဲ့ ထုတ် ပလက်စတစ်လောင်းပြီး လိုက်ရောင်းနေတာ စီးပွားတောင် ဖြစ်လို့… တောက လာတဲ့ လူတွေ ရွာက အပြန်မှာ အိမ်က မိသားစု မြင်ဖူးအောင် လက်ဆောင်အနေနဲ့ ၀ယ်တာမျိုးတွေ ရှိတတ်တယ်။ တခါတလေ မီးပွိုင့်တွေမှာတောင် တွေ့သေးတယ်။ အင်တာနက်မှာ မြင်ဖူးနေတာ အနည်းဆုံး ၃နှစ်လောက် ရှိနေလေမလားပဲ..
ဇော်ဂျိံ ဒုတ် အဲ တောင်မွှေး(တောင်ဝှေး)ပဲလိုတော့တယ်။
အဲ့အသီးကိုမတွေ့ ဖူးဘူးအခု့မှတွေ့ဘူးတာအခု့ကြည့်ခွင့်ရတဲ့အတွက်နောက်ဝမ်းသူပါတယ်နောက်လာနောက်သားတွေ ကိုလည်းပြလို့ရတယ်ပုံလေးကိုကြိုက်လို့ဖုန်းထဲမှာတောင်ထည့်ထားလိုက်ပြီး
ဖယ်လော့ ရှားလော့ ……
သင်တို့ အနုမြူဝိဇ္ဖာနှင့် မဆိုင်………….
ကျွန်ုပ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိန်းရေး လေစွမ်းအင် ၀ိဇ္ဖာနှင့်သာ ဆိုင်သော သူယောင်မယ်များ ဖြစ်ပေတယ်….
သူယောင်မယ်သီး နက်ထဲမှာတွေ့ လို့ခူးစားမိတာကြာပါပြီ..